Masviriro Andakaita Babe Rekubasa Kwangu!!! – Makuhwa.co.zw
Masviriro Andakaita Babe Rekubasa Kwangu!!!
Nerimwe zuva ndakadekara hangu muoffice mangu ndakanzwa knock knock padoor ndokubva ndati “come in”. Wanike ah chibaby chino chivhindikiti chinoshandira kune rimwe department repacomany pedu chapinda chakabata fomu rekukwereta mari.
Chakati chasvika wanei mwana akazvichenera akarova katight mini skirt neka sleeveless top kaiita kunge kachaboorwa nenyatso dzemazamhu aive asiri muBra. Takabvapo ndokupfuura nepafood court kwakutenga tunodyiwa dyiwa twunonanka ndiye hutu nemasvingo road tonanga kumakwiro kwandinombokwirira kana ndichida kusvira ndichinyatsofefeterwa. Mwanasikana akandibvunza achinyaririra achiti “ Ko taakuenda kupi?” ini ndokuti zvangu” I just like the wild saka rega timboona shiri netumwe twakadaro tozodzoka zvedu ko unomhanyireyi, the day is stil young.
Related Topics:Masviriro Andakaita Babe Rekubasa Kwangu!!!
Mboro yeKUBA inonaka!!! – Married Woman Confesses
Matinji aJane Akandidhonzera Mukati kati meBeche!!!